Ukuhambisa ngenqanawa kudla ngokuthatha iintsuku ezingama-3-4 zokuhanjiswa kwaye kunokukhangelwa kwi-intanethi kuwo onke amanyathelo endlela. Iipasile zikhuselwe ngokupheleleyo. Utyikityo luyafuneka xa kuziswa. Ukuhanjiswa ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu kumazwe amaninzi. Azikho iibhokisi ze-PO (ngaphandle kwe-UAE, Saudi Arabia ne-Kuwait), iidilesi ze-APO okanye ze-FPO ezinokusetyenziswa. Phawula: Ukuba unayo 'utyikityo kwifayile', nceda tsalela i-EMS ukurhoxisa olu gunyaziso. Iipakeji ezithunyelwa ngaphandle kokutyikitywa, ngenxa 'yokutyikitywa kwifayile' azinakho ukugqunywa ngumphathi wethu weinshurensi.
Onke amatye aboniswe 'njengafumanekayo' asesitokisini kwaye alungele ukuhanjiswa kwangoko. Ii-odolo zenziwa ngaphakathi kosuku olu-1 lokusebenza. Ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu.
Iinkcukacha ezongezelelweyo Kumazwe amaninzi ukuthunyelwa ngenqanawa okuxeliweyo ngokufanelekileyo kuxhomekeke kwimirhumo yerhafu kunye nerhafu. Iposi ebhalisiweyo ithatha ixesha elide, kodwa kuthintela umrhumo owongezelelweyo. Siyavuya ukuthumela iodolo yakho njengo "Sipho", kodwa nceda uqaphele ukuba asinakulawula ngaphezulu kweentlawulo ezinokwenzeka kwilizwe lakho.
invoyisi Zonke iiphakheji ezivela kwi-GEMIC zibandakanya i-invoice epheleleyo. Ndiyacela Qhagamshelana nathi phambi kokufaka i-odolo yakho, ukuba udinga invoyisi yokwemfuneko okanye akukho invoyisi konke konke.